မီးရှူးတိုင်ဟာ ပန်းတိုင်မရောက်ခင်မှာ ငြိမ်းမသွားဖို့ပဲလိုတယ် | အံ့ဘုန်းမြတ်
Posted by ahuntphonemyat ⋅ May 8, 2009	⋅4Comments
Journalist.	View all posts by ahuntphonemyat »	« သင်္ချီုင်းတော်ည
Posted by mnhy | May 8, 2009, 11:18 am အရေးအသားလေးသဘောကျမိတယ်
Posted by ကလျာ | May 11, 2009, 8:42 am ဆောင်းပါးနဲ့ ဆိုင်ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင် ပန်းချီကားလေးကိုတော့ သဘောကျတယ်။
Posted by hololodilolo | May 19, 2009, 8:04 am ဒီလိုနဲ့ စစ်ပွဲဆိုတာ လူငယ်သေကြေပြီး လူကြီးတွေ စကားပြောရာ နေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရတယ်….
Posted by ပီတိ | September 17, 2010, 8:34 am LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...